Filoha Ravalomanana: "izaho ihany no hanambara ny daty hiverenako" | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Maro be ny resa- be mandeha tato ho ato mahakasika ny fiverenan'ny filoha Ravalomanana. Efa misy mandroso daty mihitsy aza milaza fa tsy maintsy ho tonga eto ny filoha amin'ny 8 Oktobra. Raha ny vaovao marim-pototra voahangona anefa dia nametraka mazava tsara ny filoha Ravalomanana fa dia " izy ary izy irery ihany no hanambara mivantana ny daty hiverenany satria dia tsy maintsy hiverina izy". Mbola tsy nandroso daty araka izany ny tenany fa dia misitery aloha izany daty izany, ho an'ny rehetra. Ankoatra izay dia nohamafisin'ny filoha fa dia "hirotsaka ho fidiana ho Filohan'ny Repoblika ny tenany, satria dia manana tanjona ny hanarina ny firenena miaraka amin'ny programan'asa maty paika.
Tsy hamaly faty na amin'iza na amin'iza ny tenany ary nanome toky fa tsy hamitaka ny mpiray tanindrazana aminy". Ankoatra izay dia nanamafy ny tenany fa izy izao no mitarika ny antoko TIM. Mahakasika ilay resaka nezahina naparitaka ny amin'ny tsy fahafahany mivezivezy na ilay "assignation à résidence fixe"dia noporofoiny tsara fa tsy marina izany. Afaka miriaria tsara ao Afrika Atsimo izy mianakavy, ary any amin'ny filoha tsara ny passeport-ny.
Mpirahalahy mian'ala ny vahoaka Malagasy sy ny filoha Ravalomanana, mifampatoky, mifanampy. Ny filoha rahateo tsy miala amin'ny filamatra napetrany hoe "tonga miaraka ho fanombohana ary maisa miaraka ho fahombiazana".